आइतवार, जेष्ठ १२, २०७६ मा प्रकाशित
हामीले अहिले पनि कतिपय यस्ता व्यक्ति देख्छौं जो उमेर कटेर पनि जवान देखिन्छन् । ६० को उमेरमा पनि ३५ को जस्तै देखिने धेरै जना छन् । चाहना त सबैको हुन्छ जवान हुने । तर त्यसअनुसारको खान–पान नहुँदा सबैले आफ्नो चाहना पूरा गर्न सकेका हुँदैनन् । अाफूलार्इ सधैँ जवान देखाउन चाहने मानिसले यस्ता खाना कम खाने..
अनुहार चम्किलो बनाउने यी हुन् ६ घरेलु उपाय
बिहिबार, जेष्ठ ९, २०७६ मा प्रकाशित
उमेर नपुग्दै अनुहारको छाला चाउरिन पुग्छ । जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि कतिपयको अनुहार भनेजस्तो चम्किलो हुँदैन । अनुहारको छाला चम्किलो र मुलायम बनाउन ब्युटिपार्लर धाउनेहरूको पनि कमी छैन । तर, केही महत्वपूर्ण कुराको ख्याल गर्ने हो भने अनुहारको छाला सधैँ चम्किलो हुन्छ, चाउरी पनि पर्दैन । मुसुरोको..
धुलो, धूँवा र चिसोबाट अनुहारको सौन्दर्य जोगाउने यस्तो छ काइदा
शुक्रबार, जेष्ठ ३, २०७६ मा प्रकाशित
चिसो एवं सुख्खा हावा । त्यसमाथि प्रदूषण । छालाको सौन्दर्यलाई यस्तो प्रतिकुलताबाट जोगाउन गाह्रो हुन्छ । किनभने, यो मौसममा हावा सुख्खा हुन्छ । त्यसले छालाको नरमपन पनि नष्ट गरिदिन्छ । अर्कोतिर धुलो र धूँवाले छालालाई हानी पुर्‍याउँछ । त्यसैपनि प्रदूषणले छालालाई असर गरिरहेको हुन्छ । काठमाडौं जस्तो..
बुधबार, जेष्ठ १, २०७६ मा प्रकाशित
उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर कतिपय उमेर पुगीसकेकाहरुको पनि अनुहार कलिलै र चाउरी रहित हुन्छ । उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महंगो क्रिम र लोसनको सट्टा प्राकृतिक उपाय अपनाउनुपर्छ । यसका लागि फलफुलमा..
राम्रो अनुहार सधैं रहिरहोस् भन्ने लाग्छ ? यसो गर्नुस्
राम्रो बन्ने रहर र इच्चा कस्लाई पो हुँदैन र? राम्रो अनुहार सधैं राखिरहनका लागि अनुहारअको स्याहार गर्न अती आवश्यक छ। हामीले नियमित अनुहार धुने गरेमा अनुहारमा फोहोर का कारण आउने बिभिन्न खटिरा बाट हामीले मुक्ती पाउछौ। यदी हामीले मेकअप गरेका छौ भने राती सुत्नु अघी त्यो मेकप धुन अती आवश्यक छ। हामीलाई..
आइतवार, बैशाख १५, २०७६ मा प्रकाशित
टमाटरको प्रयोग राम्रो स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभएर मानिसको अनुहारलाई निखार्न पनि प्रयोग हुने गर्छ । टमाटरमा मानिसको अनुहारलाई निकै फाइदा दिने तत्वहरु हुन्छन् । यसले बढ्दो उमेरको लक्षणलाई कम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यसले सनस्क्रिनले जसरी अनुहारको हेरचाह गर्छ, त्यसरी नै गर्ने गर्छ । टमाटरमा भिटामिन ए,..
ब्युटिसियन प्रमिलालाई मन्त्री पण्डितद्वारा राष्ट्रिय सम्मान
काठमाडौं । ब्युटिसियन प्रमिला कटुवाल (परी) राष्ट्रिय खबर डटकमको छैठौ वार्षिकोत्सवको अबसरमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा सम्मानित भएका छन्। उनलाई सौन्दर्य क्षेत्र मार्फत राष्ट्र हितको खातिर योगदान पुर्‍याएको भन्दै राष्ट्रिय खबर डटकमले सम्मान गरेको हो। लामो समय..
युवा व्यबसायी श्रेष्ठलाई मन्त्री पण्डितद्वारा राष्ट्रिय सम्मान
बिहिबार, बैशाख १२, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । राष्मिलाज फेसियल हाउस एंड ब्युटी केयरका संचालक तथा युवा ब्यबसायी प्रकाश कुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय खबर डटकमको छैठौ वार्षिकोत्सवको अबसरमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्री लालबाबु पण्डित द्वारा सम्मानित भएका छन्। उनलाई ब्यबसायी मार्फत राष्ट्र हितको खातिर योगदान पुर्‍याएको..
अनुहारमा दाग छ ? यी हुन् सजिलै हटाउने २० तरिका
दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ । कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ । यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती काटेर अनुहारमा दल्ने र केही समय त्यसै छोडी मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ । दूधमा ल्याक्टिक एसिड पाइन्छ । काँचो दूधमा कपास डुबाई..
पुरीको उपन्यास ‘परी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । सीमा पुरीको उपन्यास ‘परी’ सार्वजनिक भएको छ। शनिबार प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्य दोर्जे लामाले उपन्यास सार्वजनिक गरेका हुन्। पुस्तकको समीक्षा गर्दै समालोचक रमेश शुभेच्छुले परी सौतेनी छोराछोरीप्रति हेरिने दृष्टिकोणलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिएको फरक उपन्यास भएको बताए। सामाजिक..
भाषविद्, साहित्यकार तथा शब्दकोशकार वसन्तकुमार शर्मा ’नेपाल’को निधन
काठमाडौं – भाषविद्, साहित्यकार तथा शब्दकोशकार वसन्तकुमार शर्मा ’नेपाल’को निधन भएको छ । नेपालको शनिवार दिउँसो चावहिलस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो । ९१ वर्षीय नेपाल केही समयदेखि अस्वस्थ थिए। उनको छातीमा सङ्क्रमण भएको थियो । उनका ’नेपाली शब्दसागर’ शब्दकोश तथा अन्य दर्जनौँ साहित्यिक कृति..
शुक्रबार, बैशाख ६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं – मुलुकभरि नै पर्यटन जागरणको सन्देश फैलाउने उद्देश्यले किर्तिमानी आरोही फुर्वा तेन्जिङ शेर्पाले ‘मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ’ अङ्कित झन्डालाई विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फहराउने भएका छन् । १३ औँ पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका शेर्पाको नाउँ गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकड्समा समेत दर्ज छ । नेपाल..
वन्यजन्तु सप्ताह: हात्ती मेलामा हात्तीको विशेष पूजा
बर्दिया – वन्यजन्तु सप्ताहको अवसर पारी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक रहेको हात्तीसारमा आयोजना गरिएको हात्ती मेलामा हात्तीको विशेष पूजा गरिएको छ । नयाँ वर्षसँगै सुरु भएको वन्यजन्तु सप्ताहको दोस्रो दिन वैशाख २ गते र तेस्रो दिन ३ गते निकुञ्जको हात्तीसारमा हात्तीको विशेष पूजा गरिएको हो । चोरी..
चीनले बनायो विश्वकाे सर्वाेच्च शिखर सगरमाथामा वातावरणमैत्री शाैचालय
काठमाण्डाै - चीनले विश्वकाे सर्वाेच्च शिखर सगरमाथामा वातावरणमैत्री शाैचालय बनाउने भएकाे छ । सगरमाथा आराेहणमा जानेकाे संख्या बढ्दै जाँदा त्यहाँ फोहोर पनि बढेकाले सगरमाथा स्वच्छ बनाउन चीनले शाैचालय बनाइदिन लागेकाे हाे । पर्यावरणअनुकूल बनाइने यो शौचालय सगरमाथाको ७ हजार २८ मिटरको उचाइमा एक..
जाडो सुरु भएसँगै धेरैजनालाई छाला फ्रुस्रो हुने समस्या हुन्छ । तापक्रममा आएको अकस्मात् गिरावटसँगै छाला तथा ओठ फुट्ने, सुख्खा हुने र चायाँ आउने समस्या हुन्छ । छाला विज्ञहरुका अुनसार चिसोबाट हुने एलेर्जीले बालबालिकामा छाला फुस्रो र फुट्ने गर्छ भने प्रौढहरुमा थाइराइडको असन्तुलनका कारण अनुहारको..